बाहिरी जिल्लामा स्याउका बिरुवा निर्यात गर्दै जुम्लाका किसान – Dullu Khabar
बाहिरी जिल्लामा स्याउका बिरुवा निर्यात गर्दै जुम्लाका किसान
४ माघ २०७७, आईतवार २३:४१
, जुम्ला । जुम्लाका किसान स्याउका बिरुवा बाहिरी जिल्लामा निर्यात गर्न लागिपरेका छन् । बाहिरी जिल्लाका किसान बिरुवा लिन नर्सरीमै पुग्ने गरेको स्याउ किसान गोपाल रोकायाले जानकारी दिए ।
यस वर्षमा पहिलो पटक दाङ जिल्लामा स्याउ बिरुवा निर्यात गरेसँगै बाहिरी जिल्लाबाट स्याउका बिरुवा खरीद गर्न नर्सरीमै स्याउ लगाउने किसानको भीड हुने गरेका तिला गाउँपालिका–१ का वरिष्ठ स्याउ किसान महेन्द्र बुढाले बताए । यस याममा मात्र करीब ६ हजार स्याउका बिरुवा बेचेको सिञ्जा गाउँपालिका स्याउ किसान हंश कठायतले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘स्याउका बिरुवा लिन कृषि विकास कार्यालय दाङको टोली आइ र नर्सरीबाटै छ हजार बिरुवा लिएर गएको छ ।’ रेड, रोयल र गोल्डेन जातका स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात भएको छ । स्याउका बिरुवा रोप्ने मौसम शुरु भएसँगै यहाँका स्थानीयवासी र जिल्ला बाहिरका किसान आउन थालेको यहाँका स्याउ नर्सरीका सञ्चालक बताउँछन् ।
नर्सरीमै रू. ४० प्रतिबिरुवा विक्री हुने गरेको यहाँका किसान बताउँछन् । फाट्टफुट्ट किन्दा प्रतिबिरुवा रू. ५० पर्छ । निरोगी बिरुवा उत्पादन गरेर जिल्ला बाहिर पठाउन किसान यस याममा लागिपरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइका कार्यालय प्रमुख नवराज भण्डारीले जानकारी दिए ।
कार्यालय जिल्लामा सञ्चालन आएदेखि स्याउखेतीमा आधुनिकीकरणदेखि किसानलाई चाहिने सीपमूलक तालीमले यहाँका स्याउ किसानलाई राहत भएको उनले बताए । अर्गानिक मलखाद्य प्रयोग गरेर हुर्केका स्याउका बिरुवा किन्न व्यापारी गाउँमै पुग्ने गरेका छन् । स्याउका बिरुवा जिल्ला बाहिर निर्यात गर्नका लागि यहाँका किसान संगठिन हुने गरेको किसान परी कार्कीले जानकारी दिए ।
जिल्ला बाहिरबाट आएको मागअनुसार सबै किसानले सल्लाह गरेर एकैपटक निर्यात गर्ने वातावरणका लागि पहल भइरहेको छ । यस कार्यका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सकारात्मक छ । हरेक वर्ष जुम्लादेखि स्याउका बिरुवा निर्यात हुने गरेको छ । यहाँको बिरुवा तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका पाँच ओटा जिल्ला बझाङ, बाजुरा, दैलेख, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, डोटी र जाजरकोटसम्म निर्यात हुने गरेको छ ।
चिसो हावापानीमा निरोगी बिरुवा पाइने भएकाले सबै किसानको ध्यान जुम्लामा केन्द्रित हुने गरेको किसान बताउँछन् । हाल जिल्लामा ११० नर्स फर्म कृषि विकास कार्यालयका दर्ता भएका छन् जसमध्ये करीब ८० नर्सरी धनीले सक्रियरुपमा विरुवा उमारिरहेको कार्यालय प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताए । अगामी फागुनको पहिलो सातासम्म स्याउ लगाउन मिल्ने भएकाले नर्सको माग आउने अपेक्षा गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
स्याउका बिरुवा यहाँका किसानको प्रमुख आम्दानीको स्रोतमध्ये एक हो । जिल्लामा ३ हजार ८०० हेक्टरमा स्याउ रोपिएकामध्ये करीब एक हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलबाट स्याउले फल दिने गरेको सो कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।